मदन र प्रविनाको “राजा रानी” (गीत)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मदन र प्रविनाको “राजा रानी” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक मदन ढकाल र गायिका प्रविना आचार्यको “राजा रानी” बोलको गीत सार्वाजनिक भएको छ । अर्जुना थापाको शब्द रहेको उक्त गीतमा गणेश राना र विष्णु शर्माको संगीत रहेको छ भने अर्जुना थापाको नै एरेंज रहेको छ । माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा आफ्नो मायालु र आफुलाई राजा राजी भनिएको छ । मदन ढकाल र गायिका प्रविना आचार्यको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो मरुभुमी नारायणले छायाँकन गरेका हुन् ।
एक माया गर्ने जोडीलाई प्रस्तुत गरिएको उक्त गीतको भिडियोमा मदन र प्रविनालाई राजा रानीको रुपमा देख्न सकिन्छ । अर्जुन थापा मगरको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियो रोशन धितालले सम्पादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रियंका र आयुष्मानको “मायाको खेल” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक मोहन राईको “मायाको खेल” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । दिपेन्द्रनाथ शर्माको शब्द रहेको उक्त गीतमा कन्काइस्ट राईको संगीत रहेको छ भने शास शाक्यको एरेंज रहेको छ । माया प्रेमको भाव समावेश गरिएको उक्त गीतमा मायामा हुने पिडाको भावलाई समेटिएको छ । नायिका प्रियंका कार्की, नायक आयुष्मान देशराज जोशी , डा. दिजान र कुसुमको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो सुमित राज भट्टले छायाँकन गरेका हुन् । नायिका प्रियंका कार्कीलाई फरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको उक्त गीतमा उनलाई निकै राम्रो नृत्य गर्दै देख्न सकिन्छ ।
फिल्मका साथ साथै गीतका भिडियोमा पनि रुचाइएको नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीको जोडीलाई उक्त गीतमा आयुष्मानले प्रियंकालाई चाहेको देखाइएको छ । राजेन्द्र महर्जनको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई भिपलभ आर पोखरेलले संपादन गरेका हुन् । एल्बम ‘मायाको खेल’ मा समावेश रहेको उक्त गीतको भिडियोमा सुस्मा कोइरालाको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : छिरिङ र वर्षाको “नाचिन्छ नाचिन्छ” (गीत)
फिल्मी फण्डा । शशिकला मोक्तानको “नाचिन्छ नाचिन्छ” बोलको गीत सार्बजनिक भएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्बजनिक गरिएको उक्त तामाङ सेलोमा मायालुलाई घरमा माग्न आउन भनिएको छ । बिनय लामाको शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा पवन वाँङ लामाको एरेंज रहेको छ । छिरिङ लामा र वर्षा थिङको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो एसके महर्जनले छायाँकन गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा छिरिङ लामा र वर्षा थिङको निकै राम्रो नृत्य देख्न सकिन्छ हेरुका लामाले निर्देशन तथा कोरियोग्राफीमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई दिलिप योञ्जनले सम्पादन गरेका हुन्। गीतको भिडियो हेरुका लामाको अफिसियल यु ट्युब च्यानलबाट सार्बजनिक भएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : राजन र सरिताको “प्यारो ओखलढुङगा” (गीत)
फिल्मी फण्डा । गायक राजन श्रेष्ठ र गायिका सरिता श्रेष्ठको “प्यारो ओखलढुङगा” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायिका सरिता श्रेष्ठको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा यम थापा मगरको एरेंज रहेको छ । न्यु अन्जना डिजिटल मिडिया प्रालीको प्रस्तुतीमा रहेको उक्त गीतमा मौलिक लोक लयमा आधारित रहेको छ । गीतमा ओखलढुङगा जिल्लाका विभिन्न रमणिय स्थानहरुको वर्णन गरिएको छ भने आफनो प्रेम सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनको लागी आफु निकै हतारिएको भाव समावेश गरिएको छ ।
प्रेम श्रेष्ठ र पुजा कटुवालको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो दिनेश मुस्कानले छायाँकन तथा सम्पादन गरेका हुन् । निशान एस केको कोरियोग्राफीमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई अर्जुन पन्तले निर्देशन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : शान्ती र मनोजको “बेवारीसे लास” (गीत)
फिल्मी फण्डा । चर्चित गायिका शान्ती श्री परियार र गायक मनोज घिमिरेको “बेवारीसे लास” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक मनोज घिमिरेको नै शब्द तथा संगीत रहेको उक्त गीतमा कमल सौरागको एरेंज रहेको छ । माया पिरतीको भाव समेटिएको उक्त गीतमा मायालु नहुँदा सम्झि रुने कुरा गरिएको छ ।
सिमा, देव, परि र मनोजको अभिनय रहेको उक्त गीतको भिडियो सागर गौतमले छायाँकन गरेका हुन् । देव क्षेत्रीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई रमित ओलीले संपादन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रमोदको “तिमी सपनाहरु नदेउ” (गीत)